Day ny fahalalana - Poltava Medical & Dental Academy
Septambra 1, 2016, ny tamin'ilay fotoana Fahalalana Day ao amin'ny Palace ny fialam-boly “Novambra” manetriketrika fivorian'ny Filan-kevitry ny Academic VDNZ Ukraine “Okrainiana Medical Dental Academy”, izay tamin'ity taona ity Mankalaza ny tsingerintaona 95th. Nandritra ny fivoriana manetriketrika natao tamin'ny fanoloran-tenany ho mpianatra taona voalohany, izay manana soa aman-tsara ny fifaninanana fidirana nandalo fitsapana sy ho tonga mpikambana ao amin'ny fianakaviana maro ny iray amin'ireo toeram-pianarana ambony kokoa nitarika an'i Ukraine.
Tamin'ny fankalazana no nanatrika ny mpitarika ny faritra sy ny manam-pahefana eo an-toerana, mpitondra fivavahana, mpikambana ao amin'ny fitantanan-draharaha, sampam-pianarana, ray aman-dreny sy mpianatra ireo mpianatra taona voalohany.
Grand Fivoriana nanokatra ny Rector ny Akademia, Voninahitra Doctor ny Okraina, MD, mpampianatra, akademisiana ny Okrainiana Akademia ny Siansa Vyacheslav Nikolaevich Zhdan. Rector nandray mpianatry ny taona voalohany amin'ny fieken-keloka ho any amin'ny laharana ny Academy mpianatra sy ny ho avy dokotera naniry mahavokatra sy mahomby ny asa, feno fampandrosoana, mba handresy vaovao avo ny fahalalana sy hanatrarana tanjona naniry.
Niarahaba niova ny Ry vahiny: Olona ny governora tany Ukraine, Voninahitra Scientist an'i Ukraine Ischeykin KE, Ben'ny tanàna Poltava reny AF, Tale lefitra ao Healthcare Poltava faritra State Administration Kurilko Yu, ny ambony eveka Filaret Henichesk Novokakhovskiy sy izay tena niarahaba ny mpianatra amin'ny fampidirana ny iray amin'ireo oniversite tsara indrindra any amin'ny faritra sy Ukraine ary naneho fahatokiana fa ny amin'izao fotoana izao ny ankamaroan'ny mpianatry ny taona voalohany hanatevin-daharana ny Akademia ary hahamaro ny zava-bita eto amin'ny firenentsika.
Rivo-piainana ambony dia ambony nanjaka tany amin'ny efitrano, nandritra ny fitoriana ny manetriketrika fianianana ny mpianatra taona voalohany, izay mitondra any amin'ny tsara fiofanana, tsara fitondran-tena sy ny hetsika ara-tsosialy mavitrika. Vakio ny fianianana ny voninahitra mpianatra tsara VDNZU “MSA” Nanome Porovay Olesya sy Vladimir Ksonzu. Ary nandritra niara- “fahotana mahafaty!” Mpianatry ny taona voalohany ho an'ny fotoana voalohany teo amin'ny fiainany matihanina nametraka akanjo fotsy sy ny satroka.
Araka ny fomban-drazana Rector ny Akademia, Profesora VM Zhdan freshman mpianatra nanolotra ny an'ohatra toetra: ny fanalahidy ho an'ny firenena ny fahalalana sy ny mpianatra ID.
Mahaliana koa vaovao amin'ny endriky ny rafitra sarimihetsika, akademika, fanatanjahan-tena, kanto zava-bita ny oniversite, momba ny fahafahana sy ny fanantenana tsara izay manokatra mpianatry ny taona voalohany akademia. Amin'izao fotoana izao dia tsy nisy isalasalana fa VDNZU “Okrainiana Medical Dental Academy” – maoderina sampam izay manomana tena mahafeno fepetra, famoronana matihanina, tena matihanina.
Nandritra ny fankalazana ny minitra fahanginana ho fahatsiarovana ny lavo izay nanome ny ainy ho an'ny fahaleovan-tena sy ny tsy fivadihana ny ny tanintsika.
Tsy manan- tsahala fiara mitovy hariva Dvornik A. ary A. Lyevshyn ho an'ny mpianatra rehetra naneho ny fankasitrahany ny rehetra ny ray aman-dreny noho ny fikarakarana, faharetana sy fitiavana tsy manam-petra.
Mpandray anjara amin'ny fivoriana iray nandray tsara fikambanana mpankafy zavakanto Folk Academy, izay nanolotra tsara tarehy hira sy ny dihy.